यी नाम भएका युवतीहरुले कहिल्यै प्रेममा धोका दिंदैनन् – live 60media
यी नाम भएका युवतीहरुले कहिल्यै प्रेममा धोका दिंदैनन्
कतिपयले सुन्दरतामा पनि ध्यान दिएर प्रेम गर्ने गर्छन्, प्रेम कसैले रंगका आधारमा गर्ने गर्छन् भने कसैले उचाईका आधारमा । परिपक्कहरुले प्रेम गर्दा सोंच विचार गरेर मात्रै प्रेम प्रस्ताव राख्दछन् । कतिपयले जातका आधारमा पनि प्रेम गर्ने कि नगर्ने भनेर तय गर्दछन् । आखिर प्रेम जस्ले जसरी गरेतापनि यस्को निष्कर्श भनेकै विबाह हो । र प्रेमको अन्त्य पनि विबाहमै गएर टुंगिने हो ।
प्रेमदेखि विवाहसम्म र भविष्य पनि सोचेर प्रेम गर्ने युवतीहरु कमै हुन्छन् । र जस्ले गर्छन् ती आफैमा बौद्धिक हुन्छन् । उनीहरुलाई समझदार मानिन्छ तर, पहिला नजरमा नै प्रेममा पर्ने युवतीहरु कस्ता हुन्छन् होला ? उनीहरुको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? र उनीहरुको प्रेम कति समयसम्म टिक्छ त ? यो कुरा जान्नकोलागी एउट युवकलाई निकै नै गाह्रो कुरा हो । तरपनि जान्न सकिन्छ ।
पहिलो अक्षर ए बाट आउने युवतीहरुको स्वाभाव इमोशनल हुन्छ । यिनीहरु कुनै युवकको अनुहार हेरेर नै प्रेममा पर्छन् । यस्ता युवतीहरु छिट्टै पार्टनरलाई विश्वास गर्छन् । ‘एक्स्ट्रा केयरिङ’ प्रकृतिका यस अक्षरवाली युवती जीवनभरी पार्टनरको साथ छोड्दैनन् । त्यसैगरी बी नामका युवतीहरु पनि निकै नै संवेदनशील हुन्छन् र, छिट्टै प्रेममा पर्छन् । उनीहरु आफ्नो साथीको बानीको बारेमा सचेत हुन्छन् । आफूले आशा गरेजस्तो नभएमा बिना साथी रहन पनि स्वीकार गर्छन् ।
जी बाट नाम हुने युवती छिट्टै प्रेमको चक्करमा पर्छन् । पहिलो नजरमा नै प्रेममा पर्ने यस्ता युवतीहरु साँचो प्रेम गर्छन् । र जस्तो सुकै कठिन परिस्थितीमा पनि जीन्दगीभर साथ निभाउँछन् । त्यसैगरी एम अक्षरबाट नाम आउने युवतीहरु पनि निकै नै दयालु हुन्छन् । उनीहरुपनि छिट्टो प्रेममा पर्छन् । जो उनीहरुको जीवनमा आउँछन् उनीहरुलाई जीवनभरी साथ छोड्दैनन् ।
पी नाम भएका युवतीहरु पनि प्रेम विवाहमा विश्वास गर्छन् र छिट्टै प्रेममा पर्छन् । यिनीहरु आफ्नो पार्टनरलाई कहिल्यै धोका दिँदैनन् । यद्यपि, यिनीहरुले कहिल्यै साँचो प्रेम पाउँदैनन् । र अन्त्यमा टी बाट नाम सुरु भएका युवती छिट्टै प्रेममा पर्छन् तर व्यक्त गर्नलाई हिच्किचाउँछन् । तर यिनीहरु आफ्नो प्रेम पाउनको लागि जे पनि गर्छन् । र जीन्दगीभर आफ्नो साथीको साथ छोड्दैनन् ।
← यस्तो डरलाग्दो रोगपनि एकै रातमा निको पार्छ महले,पढ्नुहोस र सेयर गर्नुहोस
सावधान ! यस्तो समस्या भएका महिलाले भुलेर पनि खानु हुँदैन मेवा →
यो चन्द्र शमशेरकी पत्नीलाई नुहाउन बनाएको ढुंगाको ‘बाथ टप’ हो…
देशभर लागु हुँदै छ पुनः यस्तो नियम, बिद्यालय त ३ हफ्ताका लागि बन्द गर्न सिफारिस भैसक्यो अन्य के खोल्न पाइन्छ के पाइदैन ? यस्ता छन् नयाँ मापदण्ड
प्रकाश सुवेदीले कसको निर्देशनमा टिभीबाट शिल्पा पोखरेलको चरित्र हत्या गरे? करिश्मा मानन्धरले खोलिन् रहस्य, यस्तो रहेछ बास्तविकता (भिडियो हेर्नुहोस्)